“भनिन्छ नि अवसर पाए हरेक असम्भव पनि सम्भव हुन्छ ।” साँच्चै राजु अधिकारीको जीवनमा पनि यस्तै भएको छ । २०६८ साल तिर हेटौंडा बजारको चोक÷चोकमा फोहोर बटुल्ने, फालेको खानेकुरा खाएर हिड्ने, र सडकको पेटीमा रात कटाउने सडक बालक राष्ट्रिय खेलाडी बनेका छन् ।
मामाघर नेपालका संरक्षक अर्पण पराजुलीले २०६८ साल कार्तिक २७ गते देखि अधिकारी लाई अहिले सम्म पनि संरक्षण गर्दै आउनु भएको छ । मामाघर नेपालका संरक्षक पराजुली विगत १० बर्ष देखि सडक बालवालिकाको उद्धार, आवासिय सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारिवारिक पुनस्र्थापना गर्दै आएका छन् ।
जाडो महिना होस् या गर्मी सधैं खुल्ला आकाश मुनी जीवन कटाइरहेका अधिकारी अहिले राष्ट्रिय हक्की खेलाडी भएका छन् । २०६८ सालदेखि स्थापना गरिएको मामाघर नेपालका पहिलो भान्जा अधिकारीलाई १० बर्षको उमेरमा सडक बाट उद्धार गरिएको थियो ।
संरक्षक पराजुलीका अनुसार त्यो समयमा राजु सडकमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएका थिए । कालो सर्ट, च्यातिएको पुरानो थोत्रो पाइन्ट र खाली गोडा थियो उहाँको । काँधमा सेतो बोरा पछाडी भिरेका उहाँ साँच्चै हेर्दै माया लाग्दो देखिनुहुन्थ्यो । जाडो महिनाको समयमा लगलग काम्दै हेटौंडा बसपार्कको वरिपरि बस्ने उहाँलाई आनो घर कहाँ हो भन्ने पनि थाहा थिएन । त्यती मात्र होर उहाँ पुर्ण रुपमा एक्लो थिए ।
बेसाहारा बनेर हरेक दिन सडकमा बिताइरहेका अधिकारीको नाम पनि सबैको मामा अर्थात् अर्पण पराजुलीले नै राखिदिएका हुन् । सडक बाट उद्धार गर्दा आनो नाम के हो भन्ने समेत थाहा नभएका अधिकारीले अहिले आफुले दोस्रो जन्म पाएकोमा खुसी लागेको बताएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो,“सडकमा बस्दा लागुऔषधहरु प्रयोग गरिन्थ्यो । सुरु सुरुमा त यहाँ बस्नै गाह्रो हुन्थ्यो । धेरै पटक भागेर पनि गएको थिए । तर मामाले यो सबै मेरै लागी पो गर्नुभएको रहेछ । त्यो बेला मलाई उद्धार गरेर यहाँ नल्याउनु भएको भए म अहिले कस्तो अवस्थामा हुन्थें होला, सम्झँदा पनि डर लाग्छ अहिले त ।” घर, परिवार तथा आफन्त को हुन् ? कहाँ छन् ? केही थाहा नभएको उहाँको भनाइ छ ।
मामाघर नेपालमा बस्न थाले पछि हक्की खेल्न सुरु गरेका अधिकारी अहिले राष्ट्रिय हक्की खेलाडी बन्न सफल भएका छन् । भारतमा गएर नेपाली टिमको क्याप्टेन रहेर हक्की खेलेर उत्कृष्ट खेलाडी समेत घोषित भएका थिए । हक्की खेल क्षेत्रमा आनो भविष्य बनाउने सपना देखेका उहाँलाई मामा अर्पण पराजुलीको भरपुर साथ सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
खेल क्षेत्रलाई रहरको पाटोमा राखेर पेशाको रुपमा पल्म्बर र वाइरि∙को काम समेत गर्दै आइरहनु भएको छ । खेलले मात्र आर्थिक क्षेत्रमा सवल बन्न नसकिएला कि भन्ने डरले वाइरि∙ र पल्म्बर सिकेको उहाँको भनाइ छ ।
मामाघर नेपालमा २०६८ साल देखी अहिले सम्म १८१ जना सडक बालकको संरक्षण गरिएको छ । १२८ जनालाई पारिवारिक पुनस्र्थापना गरिएको छ । त्यस्तै सदाबहार रुपमा २५ देखि ३० जना सडक बालक रहने गरेका छन् । सहयोगी हातहरुको साहाराले चलिरहेको मामाघर नेपाल साँच्चै सबैको साझा संस्था बनेको छ । मामाघर नेपाल स्थापना काल देखी त्यही संरक्षणमा रहनु भएका अधिकारी अहिले पनि मामाघरमा बस्दै आउनु भएको छ ।
आफुलाई अर्पण मामाले उद्धार गरेर जसरी नयाँ जिन्दगी प्रदान गर्नुभयो । आफु पनि यसरी नै सडक बालकहरुको उद्धार तथा संरक्षणमा लागी पर्ने सपना रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसका साथै हक्की खेल खेलेर नेपालको नाम उच्च राख्ने नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।